ကွတ်ကီး | အော်ဂဲနစ်လျှော်
Organic Hemp သည် Organic Hemp အတွက် Cookies များအတွက် Organic Hemp အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Forbedre Din Oplevelse တွင်၊ Brugen ၏စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ် Hemp မှသဘာ ၀ အတိုင်းအတာကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် rammerne af den gældende lovgivning ။ personoplysninger (såsom navn, telefonnummer, købshistorik og adresse) သည်အပြုအမူအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သူမရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကသူမအတွက်သတင်းအချက်အလက်, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang to oplysningerne og hvordan du gør indsigelse vedr ။ အော်ဂဲနစ်လျှော်သည် privatlivspolitik အတွက် o cookies များကို။ ဤသည်မှာ cookie brugeren တွင်တည်ရှိနေသောအရာများဖြစ်သည်။ brugeren တွင်တည်ရှိနေသော cookies များကို Vy brug နှင့် cookie cookie တွင်တွေ့နိုင်သည်။ cookie hvad? ကွန်ပျူတာ၏ကွန်ပြူတာသည်ကွန်ပျူတာ၏ကွန်ပြူတာအတွင်းရှိကွန်ပျူတာများကို cookie နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းခံရသည်။ Du kan သည်သူမအတွက် cookie များသာဖြစ်သည်။ http://minecookies.org/information-om-cookies/ Cookies သည် Organic Hemp ၏ funktionalitet ဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ် Hemp သည်လက်အောက်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာ cookies များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ LuxNordica ၏သစ်ခုတ်များ၊ ထိုနေရာတွင်ချက်ပြုတ်သည့်နေရာ၌ cookie အတွက်ဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကို vore လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Organis Hemp တွင်ရှိသောကွတ်ကီးများ၊ ကွန်ပြူတာသည်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပြူတာများဖြစ်သော browser များ၊ Organic Hemp များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Organic Hemp ကိုအသုံးပြုသည်။ Hvilke cookies များကို anvender vi? Navn Beskrivelse လှည်း CATEGORY_INFO နှိုင်းယှဉ် CURRENCY ဖြင့်အကောက်ခွန် CUSTOMER_AUTH CUSTOMER_INFO CUSTOMER_SEGMENT_IDS EXTERNAL_NO_CACHE Frontend ဧည့်သည်များ-VIEW LAST_CATEGORY LAST_PRODUCT NEWMESSAGE NO_CACHE PERSISTENT_SHOPPING_CART Poll POLLN RECENTLYCOMPARED STF STORE USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE VIEWED_PRODUCT_IDS လိုချင်သောစာရင်း WISHLIST_CNT Gemmer သတင်းအချက်အလက် om din indkøbskurv Gemmer kategori-သတင်းအချက်အလက် PA siden, som betyder မှာ sider Loading hurtigere Varer som du ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းပြုစု။ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဤစာစောင်၏စာတွင်ဗားရှင်းအသစ်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ယခုခေတ်တွင်စာဝှက်ရန်ဗားရှင်းအနေဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် Gemmer Kunde အပိုင်း ID နံပါတ် Indicerer သည်ဤသိုလှောင်ခန်းသို့သွားသည်။ ဆာဗာသည်ဥယျာဉ်မှူး၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတူးဖော်ရရှိပြီးဖြစ်သည့်အလျင်အမြန်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအားအရှိန်လျှော့တပ်ဆင်ခြင်း Indicerer သည်ဤနည်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ IDfသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အပို။ သတင်းအချက်အလက်၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ကုန်များအနေဖြင့်ရောင်းချခြင်း၊ ကိတ်မုန့်များကိုလက်ခံပါ Produktet, သင့်အတွက်အသင့်စားသုံးနိုင်သောအစားအစာများကိုထုတ်ကုန်များနှင့်စာရင်းသွင်းပါအန္တာရယ်လ်အန္တာရယ်မှထုတ်ကုန်များနှင့်ကွတ်ကီးစ်အိတ်များသည်ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိကွတ်ကီးများ၊ selv gøre det ။ Brug evt ။ denne vejledning, som dækker de mest gængse browsere ။ ခွံ: Bruger du flere browsere, i dem alle ။ Tredjeparts ကွတ်ကီးများ Vi bruger en række tredjeparts ဝန်ဆောင်မှုများ, hvoraf nogle bruger cookies များ။ http://minecookies.org/fravalg/ Blandt andet bruges သည် Tessjeparts ၏ cookie နှင့်အခြားဘရောက်ဇာများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ http://minecookies.org/fravalg/ Blandt andet bruges သည် tessjeparts ၏ cookies များကိုတည်ရှိသည်။ Organic Hemp Disse cookies များကို bruges မှ fx သို့သွားသည်။ bruger တစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး, ဤအမှုအရာသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး, မီလီမီတာသူမ၏ bruger vi bl.a. ဂူဂဲလ် Analytics မှ Visual Website Optimizer ။ Google Analytics မှ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout အော်ဂဲနစ် Hemp သည်ကွတ်ကီးများ၊ ကွတ်ကီးများ၊ အစိတ်အပိုင်းများသည် Google Maps, YouTube ဗီဒီယိုနှင့် Tweets eller Facebook ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ Facebook နှင့် YouTube တွင်ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏ Twitter တွင် bruger cookies များပါ ၀ င်သည်။ Organic Hemp သည်“ Anbefal Facebook”၊ “ Facebook က synes godt om” eller“ အစိတ်အပိုင်းများကိုပါ ၀ င်သည်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကို Facebook တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Google တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ရှုပါ၊ ၎င်းသည် browser ၏အိုင်တီဆိုင်ရာလိပ်စာများ၊ အိုင်ပီလိပ်စာများ၊ Organic Hemp တွင်ရှိနေသောနည်းပညာများပါရှိသည်။ Organic Hemp သည် Facebook မှဂူဂဲလ်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် logget တစ်ခုဖြစ်ပြီး Facebook / Google အတွက်အချက်အချာကျသောအချက်အလက်များကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြိုတင်ထိန်းချုပ်ထားခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။